East European University ane akapfuma tsika kudzidzisa vadzidzi dzakawanda. It rakaumbwa 1992 uye kubva ipapo vadzidzi kubva kuUkraine uyewo vakawanda vaibva kune dzimwe nyika zvinogona kuwana dzidzo pano.
Kurovedzwa purogiramu vadzidzi wokumwe kunosanganisira kudzidza panguva mukugadzirira nzira apo vanogona kuwana ruzivo inokosha Russian kana Ukrainian. Inoita kuti varambe kwavo kudzidza maererano pamwero akasarudzwa. Panguva mukugadzirira kosi vadzidzi vatorwa vanogona kudzidza chete sezvo wenguva yakazara mudzidzi.
Kana mudzidzi remarudzi achinyatsogona zvataurwa uye zvakanyorwa Ukrainian kana Russian iye (iye) anogona kudzidza chero mano University. Pashure vakabudirira kuvakwa dhipuroma chirongwa nemazamanishoni mudzidzi remarudzi vachapiwa National Diploma uye rese Vanoonekwa Diploma pamutemo rekupinda munhu Munyai nyika (nyika-negotiator).
Kurovedzwa purogiramu vadzidzi remarudzi haana kumbosiyana nokudzidziswa chirongwa nokuda Ukrainian vadzidzi. Kuvandudza ruzivo Ukrainian uye Russian vadzidzi dzakawanda zvinogona kupinda yemhando mutauro makosi apo vanogona kuwedzera ruzivo rwavo mitauro uye kudzidza kushandiswa pane kuti zvaanonyatsogona vakasarudza.
Unogona kusarudza chero zvinotevera unyanzvi pakati University wedu:
Records Management uye Informational Processing (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Pana University wedu une chikuru mukana nokubatanidza kudzidza ano kombiyuta ruzivo hurongwa matambudziko uye hwava hwokugadzira nemaoko-pamusoro pokushandisa ichangoburwa michina mitemo. vadzidzi vedu vanoshanda ane zvakawanda platforms yakakwana, mano uye deployment runyararo. Kudzidzisa Vashandi rubatsiro vadzidzi kunzwisisa anokosha pfungwa, misimboti tsika kwevanhu upfumi utariri. Munguva yokudzidza vadzidzi ongorora mamiriro ezvinhu akasiyana kuenzanisira kushanda siyana ethnical Nzira pazvinhu nemasangano.
patani (Bachelor zvaJehovha grade)
Pano unogona kudzidziswa kuvandudza zvakatipoteredza uye nokusika nemamwe mabasa. varairiri edu kusuma vadzidzi kunyatsogona kwezvinhu. Tinoedza nokubatanidza kudzidza ano kombiyuta ruzivo hurongwa matambudziko uye hwava hwokugadzira nemaoko-pamusoro pokushandisa azvino patani mitemo. Tiri kutarisira unyanzvi, chipo uye zvakasikwa vanhu vanorota pakusika yakanaka uye upenyu hwakanaka zvimwe vanhu uye kupfuura zvavaitarisira.
Philology uye zvemutauro (Bachelor zvaJehovha Degree); Translation (Tenzi Degree)
Philology uye zvemutauro anoreva pokushandisa nzira nesayenzi kuti kudzidza mitauro, kudzidza sei mitauro kana mashoko kuva. Kunze tikaedza kuzarura musuo mumwe nyika, nyika mumwe mutauro, mumwe nemagariro echinyakare. Tinoedza kukudziridza kufarira kudzidza uye kuwana ruzivo muminda siyana wemitauro. Nokuda kukoshesa yakaiswa mutauro unyanzvi vari munzanga ano, nedhigirii muna philology uye zvemutauro kunogona kutungamirira vanoverengeka inonakidza uye ramangwana-uchapupu basa mikana.
mutemo (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Chokwadi yedu yokudzidza rinotanga kunyatsogona mutemo asi zvino akapfuma interdisciplinary mikana kudzidza. Tinoedza kudzidzisa kwedu vadzidzi sei kuva gweta anogona kuongorora mamiriro ezvinhu akasiyana muminda siyana, kuwana nzira zvisarudzo uye kuti vabudise mhedziso zvakarurama. varairiri edu zvedzidzo vanoedza kuwedzera yevadzidzi maonero uye kukudziridza tsika zvaizokupa zvinobudirira, yemakwikwi uye zvetsika zvine nemagweta.
Economic Cybernetics (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Pana University wedu unogona kuwana zivo yaivapo uye hwava dzemuchina. Hwedu hwokudzidzisa Vashandi kukubatsira kugadzirira basa zvebhizimisi mubayiro. Unogona kudzidza pave mafomu uye Websites, batanidza uye kuchengetedza network. Mune ramangwana iwe uchagona dhipuroya uye kuramba michina mitsva kumabasa.
Business Economics (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Pano unogona kuwana unyanzvi uye ruzivo zvauchasangana vanoda kubasa. Uchadzidza kuverenga uye kududzira zviratidzo zvoupfumi zvinokosha. The ruzivo kuti uchawana panguva kudzidza kwako achakupai zvokushandisa uye zvinoreva kuongorora uye kududzira musika Data uye ramangwana ramangwana kuitika.
Marketing (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Munguva yokudzidza pana University yedu vadzidzi vanodzidziswa pamwe ritaure Marketing mazano uye pfungwa dzinokosha. Panguva makirasi vadzidzi teererai kukura yokutengesa zano uye zvikuru zvinoriumba ari Marketing Mix, vanogona kuongorora dzinonetsa zvezvakatipoteredza zvinhu pamusoro kumisika uye unhu mutengi maitiro anokanganisa Marketing akavhiyiwa.
Finance uye Credit (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
vadzidzi vedu kudzidza kuongorora nyika misika yemari, masangano uye yemarudzi mari hurongwa. Pamwe chete Yedzidzo varairiri vatinodzidzisa kuedza kuongorora nezvavanofunga nokuti mari pose akavhiyiwa kusanganisira manyuko guru chimbadzo ongororo, mutero nezvavanofunga kuchinjanisa mari uye kushanda guru. Vakapedza kudzidza kwedu vanokwanisa kuongorora mari anosanganikwa pamwe mutengapwe, anodawo uye kuona zviri kumisika yose.
Accounting uye odhita (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
Munguva yokudzidza rako University wedu wasvikako ruzivo rokuzvidavirira pfungwa kumusoro kwokuwirirana. Tinoshandisa chaiye-nyika nyaya zvidzidzo kuunza dzidzo yako upenyu uye chengeta kudzidza kwedu mberi achifambirana mumunda ichi kukurumidza kuchinja.
utariri (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade); Project Management (Tenzi wacho grade)
varairiri edu zvedzidzo kubatsira vadzidzi kuti vave vavo managerial hwokugadzira uye hwokukurukura kuitira kuti vachakwanisa kukwikwidzana bhizimisi zvakanaka uye kutora matanho makuru mberi zvinangwa zvavo. Munguva yokudzidza wako dzifunge zvakanaka tsika mune mhando dzakasiyana-siyana nemasangano. Tinoedza chidzore nzira itsva kuvandudza maitiro uye teererai sangano magadzirirwo.
Hotel uye Restaurant Management (Bachelor kwakaita / vaTenzi grade)
chirongwa yedu inopa vadzidzi kutaridza ruzivo uye zvinodiwa kuti anokwezva kune vavanoshandira. Tinoedza kushandisa unyanzvi vadzidzi 'uye kuita kuti zvinogona kushandiswa zvakawanda novotel mubasa indasitiri. Chirongwa anoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kumusoro kwokuwirirana madzidzisiro kuti zviite muitiro kudzidza. Munguva yokudzidza kwedu pamwe vadzidzi vane varairiri vanoedza kuwana dzakasiyana uye nzira inobudirira kuvandudza basa bhizimisi uye vanopa nzira itsva kufadza vatengi zvose 'zvinodiwa uye pfuura zvavaitarisira.
ushanyi (Bachelor zvaJehovha grade)
Tourism chinhu simba uye yemakwikwi maindasitiri kuti rinoda kukwanisa kuchinja nguva dzose kuti vatengi 'kuchinja zvinodiwa. varairiri edu vanoedza kutsanangura vatinodzidza navo kuti munhu wose uyo kunosanganisira iri basa indasitiri vanofanira kuyeuka kuti mutengi zvinogutsa, kuchengeteka uye mufaro nonyanya ainyanya ushanyi mabhizimisi. Tinoedza kurovedza zvikuru vanokwanisa uye vanobudirira vashandirwi, ivo vashandirwi vezera vatsva vanogona kusika dzinokura itsva, kuwana nzira itsva uye kupa Mujenya indasitiri kukura nyika yedu. varairiri edu zvedzidzo vanoedza kuratidza nezvebasa rinokosha okufamba uye toerisme bhizimisi mudzimba uye dzomunyika nyaya nomutemo chokuita nyika kufamba uye toerisme indasitiri.